Jose Mourinho oo aan weli go'aan ka gaarin mustaqbalka Luke Shaw
Sunday, May 27th, 2018 - 12:35:47
Thursday September 07, 2017 - 10:18:51 in Wararka by MM Shooble
Macalinjka kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa lagu soo waramayaa inuu weli ka fekerayo haddii uu Luke Shaw qandaraas cusub u saxiixo Old Trafford ama lacag caddaan ah ku heli doono ,marka uu furmo suuqa kala iibsiga xilliga qaboobaha.
22 jirkaan ayaa ku guuldareystay inuu si run ah uga badiyo tababarihiisii ​​tan iyo markii uu ka soo laabtay dhaawac, isagoo 11 kulan u saftay kooxda uu hogaamiyo tababaraha Portugal.
Mourinho ayaa si cad u dhaleeceeyay daafaca buuxa mustaqbalkiisa Man United inkastoo uu soo jeediyay in heshiiska cusub uu ku dhow yahay inuu ogolaado, Mourinho ayaa la fahamsan yahay inuu dib u dhigay go'aanka illaa iyo sanadkaan.
Shaw, oo United kaga soo biiray Southampton ,asiga oo ku yimid lacag gaareysa 27 milyan oo ginni sannadkii 2014.
Hada 10 bilood kaliya uga hartay qandaraaskiisa Man UNited,waxa ay u muuqataa in uu u saxiixi doonin Man United hishiis cuusb.
Mirror ayaa soo jeedineysa in Mourinho uu fursad siin doono xiddiga heerka caalami ee dalka England si uu ugu riyaaqo marka uu ka soo kabsanayo dhaawiciisa ugu danbeeyay, inkastoo ay jirto fursad uu ku iibin doono bisha Janaayo haddii koox xiiseyneysa ay soo baxdo.
Ciyaaryahanka da 'yarka Fulham Ryan Sessegnon iyo Danny Rose oo ka tirsan Tottenham Hotspur ayaa labadoodaba lagu tilmaamay inay bartilmaameed u yihiin Red Devils.